Federal Chancellery Archive - Human Rights & Light Art ne ∴ PixelHELPER Foundation
15 mamita hydraulic kamera mutoro nechekare ne 360Grad kamusoro musoro & Wlan
The guru chinetso ndechokuti pane mapurazi shoma chaizvo kuti vasina kudzikinurwa kusvikira pamuromo yakadyarwa nemiorivhi, asi nzvimbo yakavhurika vane & magetsi mvura.
Nhasi nhamba nemari
11.05.18 Defender & Caravan kuchengetedza mari shoma sezvinobvira muAfrica
Nzvimbo dzokutanga dzinogara munzvimbo dzeSenegal, Palestine uye nzvimbo yedu yekugadzirira muMorocco. PixelHELPER anoda kugovera dzimwe nyika dzose nerubatsiro rwemubatsiro kubva kunzvimbo yeMorocco. Tiri munzira kuenda kuMadagascar, tinoda kuisa imwechete inobatanidza nzvimbo inowanikwa munzvimbo imwe neimwe. Mafambiro eVidestream angangowedzera mikana yebasa semurimi wekurima uye kubudisa michina pamwe chete nevapoteri kuvapa ramangwana rakanaka muAfrica yeAfrica. Zvose zviri muLivestream, iwe wakagara uripo uye unosarudza chii chinoitika. Nzvimbo imwe neimwe icharatidzwa mu livestream mukati mezuva, kutaurirana kweterevhizheni pamwe nechinangwa chekuvandudza nyika kuburikidza nekuputira rubatsiro. MuMadagascar, tinoda kushandisa chironga cheGeorgian phage therapy kuti tidzivirire vanhu kubva pamapapu emapapu anokwira ipapo gore negore. Kuburikidza nechitendero chevakafa, vagari vomuchitsuwa ichi vanowanzotarisana nezvirwere zvakatouraya mamiriyoni evanhu muEurope muMiddle Ages.
Nenzira, inoshanda kuitira kuti tive nehutano hwemashoko akajeka uye tikokere "Zombies" dzisingatauri "vashandi" muhupenyu hwedu. Saka tinoramba tichiona nezvekutsvaga kwekutarisana kwekutaurirana uye nekuita nekukurumidza kuchinja mu livestream panzvimbo yematambudziko.